आयोगका पूर्वअध्यक्षको प्रश्न, कुलमानजी घरबेटीलाई कसरी कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ ? - UrjaKhabar
ऊर्जा खबर भदौ ३१, २०७६ 2891
काठमाडाैं – नेपालमा सेलेब्रेटीको खिलाप बोल्दा अपजस पाइने गरेको छ । तर, केही छैन । म विघटित विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको पूर्वअध्यक्षको नाताले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङजीलाई केही सुझाव दिनैपर्ने महसुस भयो ।
कुलमानजी, सक्नुहुन्छ भने सबै घर भाडामा बस्नेलाई छुट्टा छुट्टै मिटर दिनोस् र ६ घण्टाभन्दा कम समय लोडसेडिङ भएको मितिदेखि डेडिकेटेड-ट्रंक महसुल लिन नपाइने पूर्वआयोगको अदेशात्मक निर्देशनको पनि पालना गर्नोस् । कुलमानजी, विद्युत नियमन आयोगले वर्तमान महसुल दर समायोजन नगरेसम्म, तपाईंले घरभेटीलाई कसरी कारबाही र डेरावालालाई कसरी राहत दिनुहुन्छ ? याे यथार्तता हेरौंं ।
“एक घरमा मानौ तीन परिवार डेरा बस्छन्, तर प्राधिकरणको मिटर एउटै हुन्छ । प्रत्येक परिवारले मासिक २०० युनिट विद्युत खपत गर्दा प्राधिकरणको मिटरमा ६०० युनिट विद्युत खपत देखिनेछ । विद्यमान महसुल दरले १५ एम्पेयरको मिटरमा ६०० युनिट खपत विद्युतको बिल रु. ७०२० हुन्छ । यदि, तीन परिवारको छुट्टाछुट्टै मिटर भएको भए र बराबर (दुई-दुई सय युनिट) खपत गरेको भए प्रत्येक २०० युनिटको बिल २०२० रुपैयाँ मात्र हुन्छ र जम्मा तीन बिलको ६०६० रुपैयाँ हुन्थ्यो ।
एउटै मिटर भएका कारण प्राधिकरणले ९६० रुपैयाँ बढी लिइरहेकाे छ । यदि, प्रत्येकको सय-सय युनिट खपत हो भने प्रत्येकको बिलको ९४५ रुपैयाँले जम्मा तीन बिलको २८३५ रुपैयाँ हुन्थ्यो । तर, एउटै मिटर भएको कारण ३०० युनिट खपतमा प्राधिकरणले ३१९५ रुपैयाँ लिने गरेको छ, जुन ३६० रुपैयाँले बढी छ । काठमाडाैं लगायत शहरी क्षेत्रबाट प्राधिकरणले यसरी नै महसुल लिएकोले नाफामा जान सकेको हो ।
यदि, प्रत्येकको सय-सय युनिट खपत हो भने प्रत्येकको बिलको ९४५ रुपैयाँले जम्मा २८३५ रुपैयाँ हुन्थ्यो । कुलमानजी, तपाईंले घरबेटीलाइ प्रतियुनिट १३ रुपैयाँका दरले पैसा लिएकोमा कारबाही गर्न पनि सक्नु हुन्न र बढी हुन आएको ९६० रुपैयाँ वा ३६० रुपैयाँ घरबेटीलाइ फिर्ता गर्न पनि सक्नुहुन्न ।
थप प्रसंग- विघटित महसुल निर्धारण आयोगले बीसौं वर्षदेखि कायम रहेको गार्हस्थ प्रणालीको पुरानो परिपाटीको अन्त्य गरी ‘बल्क’ प्रणाली (बढी खपत गर्नेलाई बढी दरको महसुल) को सुरुवात गरिदिएको छ । जसबाट ग्राहको मिटर क्षमतानुसार १६, ४३, ७७ र १५६ युनिटसम्म खपत युनिटमा महसुल घटाइएको छ । बढी युनिट खपत गर्ने गार्हस्थ वर्ग, वैदेशिक नियोग, मनोरञ्जजन उद्योग, स्टार होटललगायत क्षेत्रकाे महसुलमा न्यायोचित बृद्धि गरी मिति २०७३ साउनदेखि लागू भइरहेको छ । संस्था घाटामा गएको कारण प्राधिकरण नमागेको ४०० युनिट माथिको १३ रुपैयाँको दर तथा वैदेशिक नियोग, मनोरञ्जक उद्योग, स्टार होटललगायतमा १४ रुपैयाँ महसुल कायम गरिएको हो । र, सुख्खायाममा अफ पिक काे दर पनि झिकिएको थियो ।
विद्युतको माग-आपूर्तिको कुशल व्यवस्थापन गरेर नेपाली विद्युत उपभोक्तालाई राहत दिन तपाईं सफल भएकै हो । तर, २०७३ साउनदेखि लागू भएको दर र महसुल नीतिका कारण अनावश्यक विद्युत् खेर नफाल्ने र विद्युत् उपयोगमा किफायत गर्ने मनोभावनाको विकास भएको हो । र, युद्धस्तरमा चोरी-चुहावट कम गर्न बाध्यता र प्रोत्साहन दुवै रहेको कुरा पनि कहिले काँही भनिदिनु भए र विघटित विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग पनि सम्झिनु भए हुन्थ्यो । साथै, प्राधिकरण व्यापारिक संस्था मात्र हाेइन यसको सामजिक दायित्व पनि भएकोले र नाफामा गएको देखिएकोले महसुल दरमा तुरुन्त न्ययोचित पुनरावलोकन गराउनतर्फ लाग्नोस् ।